Alefaso amin'ny alàlan'ny The Battle Cats | ny herin'ny saka rehetra Androidsis
Ny Battle Cats dia lalao catty be izay ny tanjonao lehibe dia ny handresy ny planeta iray manontolo miaraka amin'ny tafiky ny saka. Lalao ho an'ny Android izay efa tao amin'ny Google Play Store efa ela, saingy noho ny fahombiazana lehibe ananany dia tsy maintsy niresaka momba azy io izahay handao ny toerany ao amin'ity toerana lavitra ity an'ny tambajotram-pifandraisana natokana ho an'ny lalao.
Kilalao aingam-panahy avy amin'ny Metal Slug an'ny Campcom ary izany dia mampiakatra ny famokarana singa vaovao satria manana angovo bebe kokoa isika. Ireo singa ireo dia hizotra mankamin'ny tilikambon'ny fahavalo amin'ny tetikady 2D aorian'izay mba hiatrehana ireo singa fahavalo hafa izay hanandrana handresy antsika rehefa afaka manafoana ny tilikambontsika lehibe izy ireo.
1 Ny saka dia afaka mandresy ny planeta
2 Mametraha saka hafahafa any amin'ny The Battle Cats
Ny saka dia afaka mandresy ny planeta
Miaraka amin'ity fototry ny lalao ity dia miatrika ny The Battle Cats, a lohateny mahatsikaiky ary amin'izany dia mila mamorona saka rehetra azontsika atao isika mba handresena fandresena ary amin'izany dia afaka mandroso toerana amin'izany fandresena ny planeta manontolo izany isika. Tsy maintsy mandray fahefana ny saka ary ampiantsika izy ireo hahafahany manatanteraka ny nofinofin'izy ireo saka.
Toy ny amin'ny lalao maro hafa, tsy maintsy manatsara ny saka isika rehefa mandresy. Io dia hahafahantsika ampifanaraho izy ireo mba hivadika fandresena ny fifandonana. Ny fototry ny lalao dia tsotra dia tsotra ary avy amin'ny loharanon'ny aingam-panahy izay midika fa ireo lalao isan-karazany navoakan'ny Capcom tao amin'ny Google Play Store. Miresaka avy eo avy amin'i Metal Slug Attack, Fiarovana amin'ny vy o metaly x.
Hiankina amintsika izany miteraka singa bebe kokoa na manavao ny tilikambo lehibe izay manome ireo singa ireo. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mahaliana hatrany ny fanatsarana ny tahan'ny henan'ireo herijika angovo ka rehefa afaka kelikely dia mahatratra ny fara-tampony isika ary afaka mamindra singa vaovao haingana araka izay tratra. Na dia hanana ny bara fandrosoany aza ireo mandra-pahatongantsika mamorona iray vaovao.
Mametraha saka hafahafa any amin'ny The Battle Cats
Rehefa mandresy firenena isika dia hanana ny mety manangona saka vaovao eo amin'ny laharantsika. Misy karazany marobe amin'izy ireo ary izy ireo dia anisan'ny manaitaitra indrindra sy tsy fahita firy. Ary ny marina dia ilaintsika izy ireo, satria na amin'ny endrika tantara na amin'ny fanambin'ny angano, dia afaka mankafy ambaratonga an-jatony izay hametraka ny fahaizantsika amin'ity karazana lalao ity izahay.
Zava-dehibe ny fanangonana valisoa sy fanatsarana ny saka ananantsika. Mety izy ireo hihatsara amin'ny endrika samihafa, noho izany dia tsy maintsy manonitra ny tsirairay amin'ireo nampiasaintsika isika mba hahafahantsika miaro tena amin'ireo fanafihana isan-karazany hataon'ireo biby maro karazana izay ho hitantsika any amin'ireo kaontinanta samihafa.
Efa talohan'ny freemium dia efa fantatrao izay miandry anao. Na dia hilaza ny marina aza, ny lalao vola na «saka saka» azo azo tsy ny fandoavana ihany, fa ny zava-mitranga ao amin'ny Fornite, amin'ny fampiasantsika ny fotoam-piainantsika dia ahafahantsika mahazo izany, noho izany amin'ny faharetana kely dia afaka mahazo saka tsara indrindra hanana saka tsara indrindra eny an-tanantsika isika.
Farany, manontany anay ny The Battle Cats lalao mahafinaritra be ary izany dia miaraka amin'ireo saka etsy sy eroa ireo dia mamporisika antsika hamily antsika tsy azo averina izy. Raha efa nanana multiplayer an-tserasera amin'ny PvP tsara aho dia hahazo integer maro aho, na dia izany aza ny fandraisana ao amin'ny Google Play Store fa tsy maninona ireo mpilalao aman'hetsiny izay nampakatra azy.
Miorina amin'ny lafiny teknika a endri-tsoratra nalaina sy nopetahana tamin'ny tanana toy ny sary. Ny fampisehoana ara-teknika tsara ho an'ny lalao dia niasa tamin'ny fototra tsara. Izy io dia manana ny interface manokana sy ny filalaovany lalao hanampiana traikefa tokana.
Ny Battle Cats dia lalao efa napetraka ao amin'ny Google Play Store ary mametraka anao alohan'ny fandresena an'izao tontolo izao miaraka amina saka tena mampidi-doza miaraka amin'ny fahaiza-manao maro. Ankehitriny dia tsy maintsy ianao no hitarika azy ireo handresy ity planeta ity.
The ady Cats
Sarina saka lehibe
Haavo an-jatony maro hilalao sy handresy an'izao tontolo izao
Tsy hita ny PvP
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Mandresy ny planeta iray manontolo miaraka amin'ny tafiky ny saka ao amin'ny The Battle Cats
Tsy eken'ny CEO Blackberry ny finday avo lenta satria "be loatra izy ireo"